QM oo shaacisay iney sii kordhayaan tirada Qaxootiga Dhadhaab ee ku soo laabanaya Soomaaliya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA QM oo shaacisay iney sii kordhayaan tirada Qaxootiga Dhadhaab ee ku soo...
QM oo shaacisay iney sii kordhayaan tirada Qaxootiga Dhadhaab ee ku soo laabanaya Soomaaliya
Muqdisho(SONNA) Hoos u dhac ku yimaaday dhaqaalihii ku bixi jiray Qaxootiga ku dhaqan Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab Kenya iyo tirada dadka deegaansanaya Xeryahaasi oo hoos u dhacday ayaa horseedeysa in Qaramada Midoobay dib u soo celiso howlgaladeedii Xeryaha Dhadhaab,sida ay sheegtay Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga Aduunka UNHCR.
Tirada guud ee inta badan dadka Soomaalida ah ee ku nool Dhadhaab ayaa hoos u dhac ku yimid qiyaastii kala bar sannadihii ugu dambeeyay – laga soo bilaabo sanadkii 2011-kii oo tirada Qaxootiga ay ahaayeen 464,500 ilaa 240,000 bartamaha Sebtembar, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Miisaaniyadda xeryaha ayaa la jaray 70-boqolkiiba isla muddadaas, ayuu yiri afhayeenka hay’adda qaxootiga ee QM Yvonne Ndege.
Natiijada, ay heshay Qaramada Midoobay ayaa qorsheyneysa in ay xirto xafiiskeeda Alinjugur ee Dadaab bisha March ee soo socota.
Tallaabadan ayaa dhalisay dibad-baxyo ay ka soo qaybgaleen dadka deegaanka oo ka cabsanaya inuu hoos u dhac ku yimaado adeegyadii muhiimka ah ay helayeen, Sida uu qoray Wargeyska The Nation ee ka soo baxa Kenya.
Sidoo kale,Hay’adda Qaxootiga Aduunka ee UNHCR,ayaa shaacisay iney dhimeyso Miisaaniyada ay ku bixiso Ururada ka shaqeeya Xeryaha dhadhaab ee qaabilsan Hormarinta iyo is dhex galka Bulshada iyo waliba Hay’adaha kale ee NGO-yada ee ka shaqeey mashaariicda beeraha iyo waraabintooda.
“Iyadoo la tixgelinayo dadaalka isku dhafka ah ee socda, waxaa sidoo kale loo arkayay mid caqli gal ah oo lagu xoojinayo qorshaha hirgelinta, iyada oo la adeegsanayo kheyraad la dhimay,” Sidaasi waxaa tiri Ms Ndege oo ka jawaabeysay Fariimo loo diray.
Dib u soo celinta Qaxootiga.
Qaar kale oo ka mid ah 17,229-Qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan Xeryaha Dhadhaab ayaa u diiwaan gashan inay ku soo noqdaan Soomaaliya, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Dib u celinta iskaa-wax-u-qabso waxay ku dhacdaa go’aanka shaqsiyaadka dib loo soo celinayo oo keliya,wuxuuna qorshahaan dhabaha u xaarayaa in qaxootiga mudada badan ku sugnaa xeryaha dhadhaab dib ugu soo laabtaan dalkooda kana qeyb qaataan dhismaha socda.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, 832-Qaxooti Soomaali ah ayaa dib ugu soo noqday Soomaaliya gaar ahaan magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose halka 83-Qoysna laga soo dejiyay Muqdisho.
Inkastoo tiro yar oo ka mid ah Qaxootiga ay walaac ka muujinayaan dib u soo celinta ayaa hadana warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay waxaa lagu sheegay in badi Qaxootiga ku qanacsan yihiin dib u soo celinta dalkooda hooyo.
Dowladda Soomaaliya oo kaashaneysa Hay’adaha caalamiga ah ayaa qorsheyneysa sidii dib u dejin iyo shaqo abuuris loogu sameyn lahaa Qaxootiga dib u soo laabanaya.
Previous articleDalxiiska oo leh qeexitaano kala duwan ayaa waxaa saldhig u ah Nabad iyo deganaasho+(Warbixin)
Next articleWafdi uu hogaaminayo Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo si weyn loogu soo dhoweeyay Masar”Sawirro